LifeStyle | Cele.asia
mzh - October 19, 2020 0
တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ ‘Kadenang Ginto’ (‘The Heiress’) မှလူသိများကျော်ကြားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီး Dimples Romana ဟာ မကြာသေးမီက သူမအပေါ်သစ္စာစောင့်သိသူတစ်ဦးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ အားတက်ဖွယ် vlog ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ချစ်သူစုံတွဲဟာ သူတို့နှင့်၁၇ နှစ်လုံးလုံးအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ဖော်ကို ၂ထပ်တိုက်အိမ်ဖြင့် အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က YouTubeမှာ Romana တင်လိုက်တဲ့ vlogရဲ့အစမှာတော့ Romana နှင့်ခင်ပွန်း Boyet Ahmee တို့ဟာ အိမ်ဖော်ဖြစ်သူVilma ကသူတို့ဘ၀ထဲမည်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ကို ပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီး သူတို့ရဲ့ ဗွီဒီယိုမှာတစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝင်ရန် Vilma အားဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။Romana က...
mzh - September 29, 2020 0
မကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာတောင် အလှူအတန်းတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ။ မကြာသေးမီကမှ ကိုဗစ်အလှူအဖြစ် အောက်စီဂျင်စက်တွေ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း နောက်ထပ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဓမ္မအလှူဒါန အဖြစ် ပဌာန်းတွဲကျမ်း- ၅အုပ်တွဲ အစုံ ၂၀၀ ကို ၄၇သိန်းဖိုး လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ စာအုပ်တွေရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လို့ အလကားပေးလို့ ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ်ကိုပူဇော်ချင်တဲ့ သူတွေကိုပဲရွေးပြီး ဓမ္မဒါနပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း စမိုင်းလ်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကိုအ သိပေးခဲ့ပါတယ် ။ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ အလှူရေစက်နဲ့လက်နဲ့မကွာဆိုသလို အလှူဒါနအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်နေတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေကတော့...
Khin Yadanar Soe,acontestant on The Voice, who was moved to tears byaprecious surprise that the fans made
mzh - September 16, 2020 0
Khin Yadanar Soe,aBurmese artist who finished the Blind Audition assessment on The Voice Myanmar, one of the most discussed challenges on TV, is the inheritance of fans. He said he was moved to tears continuously splash. Notwithstanding birthday...
The cat is jealous of his wife because he is too close to his master
Felines are pet-accommodating and pet-accommodating pets. Furthermore, for some as an infant gets more established, the person will grow out of this. At the point when he needs to go out, he goes to his lord and rubs it....
Naing Naing’s eldest daughter, who saved her own money and bought her first phone
Naing and Sandy Cho, who brought up to four kids inacheerful family life, brought up their youngsters with great propensities and were loaded with warm parental love. Each opportunity he came to America, he would play with...
Myo Min Htet - April 10, 2020 0
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတစ်ပါးမိသားစုကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခံစားရမယ့် အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ (၁) ပူလောင်ခြင်း သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူတွေ အမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့် အရာကတော့ ပူလောင်ခြင်း ပါပဲ သူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလို မှားနေသလိုလို၊ မှန်နေပြန်သလိုလို မသေချာမရေရာတဲ့ ခံစားချက်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး ဘယ်တော့မှ...
တချိန် သမီးလေး သိဖို့ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့ကအချိန်တန်ယောက်ျားယူမှာ ယောက်ျားကရှာကျွေးလိမ့်မယ်”တဲ့ ဘာရယ်မဟုတ် ပြုံးတော့ပြုံးမိသား၁၆နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးကသိပ်ရိုးရှင်းတယ်လို့တွေးရင်တွေးလို့ရသလို အန္တရာယ်များလိုက်တာလို့ တွေးရင်လည်းတွေးလို့ရနိုင်တာကိုး သမီးတို့အနေနဲ့ ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရုံနဲ့ အရာရာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်နေကြတာတွေထမင်းစားဖို့အတွက် ယောက်ျားယူလိုက်မယ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ် တွေးလိုက်တာတွေသိပ်များနေပြီလားလို့လည်း တွေးမိပါ့။ ခုခေတ်ယောက်ျားတွေ(အများစု)ကအတွေးအမြင်တွေပြောင်းကုန်ကြတာ သမီးတို့မသိသေးတာလား ယောက်ျားတွေက အလုပ်ရှိတဲ့မိန်းကလေး ကိုယ်ကသိပ်ရုန်းပေးစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးကို ပိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတာငွေရှိရင်ရှိ မရှိရင်ပညာတတ်ရာထူးရှိမှ ပိုသဘော ကျကြတယ်ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တတ် စီးပွားရှာတတ် အမြင်ကျယ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှ ပိုတွဲချင်ကြတယ် ဆိုတာ သူတို့ကိုအစစအရာရာသိပ်မမှီခိုတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုမှ တန်ဖိုး ပိုထားကြတယ်ဆိုတာ ငါ့သမီးတို့သိအောင်ပြောပြချင်ပါဘိယောက်ျားလုပ်စာလက်ဖြန့်တောင်းပြီး အိမ်မှာပဲ ထမင်းချက်ကလေးထိုင်မွေးမယ့်မိန်းကလေးမျိုးကို သိပ်မရွေးချင်ကြတော့ဘူး...
ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ထိရောက်တဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေချင်တဲ့ ဖြူ ဖြူ ကျော်သိန်း
Kyaw Htet Aung - March 7, 2020 0
ကားတွေ အိမ်တွေ ပေးသလိုပဲ သီချင်းအခွေတွေကိုလည်း အားပေးစေချင်တယ်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ကို အားပေးမယ်ဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ အားပေးမှု တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ Myanmar idol (Season-4) သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ဂီတလောကထဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့ အဆိုတော်တွေအတွက် ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အဆိုတော် တစ်ယောက်ခြင်းဆီတိုင်းကို အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း စကားလက်ဆောင်ပါးခဲ့ပါတယ်။ “ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို စောင့်ရှောက်တာ၊ အားပေးတာ၊ ချီးမြှင့်တယ်ဆိုတာ ကောင်းသလို အနုပညာရှင်တွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုကို ပိုပြီးအားပေးတာ...
မင်္ဂလာပန်းစည်းလေးကိုကိုင်ကာ ချစ်စရာဟန်ပန်အမူအယာလေးတွေနဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ မိုးယုစံ
Myo Min Htet - March 6, 2020 0
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး မိုးယုစံကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန် လည်လုပ် ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး သူမကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ခဲနက်အားပေးဝန်းရံကြ ပါတယ်နော်။မိုးယုက လတ်တလောမှာဆိုရင် ကြော်ငြာတွေအများအပြားရိုက်ကူးနေပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်းတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးယုက အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်နေပေမယ့်လည်း မိသားစုအတွက်လည်း မလစ် ဟင်းအောင် အစစအရာရာဂရုစိုက်ပေးနေတဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ပါ နော် ။မိုးယု ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေး Austinလေးကလည်း အမေတူလေးဖြစ်လို့ ချစ်မွှေး လေး ပါပြီး အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတတ်လို့ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးယုကတော့ သားလေးမွေးစကတည်းက လိုလေသေးမရှိအောင်ဂရုစိုက်ပေးပြီး သားလေး (၂)နှစ်ကျော်အရွယ်ထိ ဘေးမှာနေကာ သေချာသင်ကြားပြသပေးနေ တာပါနော်။ အခုဆို ရင် တော့...